Posted by shiikha on 12/11/2012 06:09:46
Waxaa tartan adagi dhexmaray Masakiinta iyo maalqabeenada, isagoo mid waliba robo inuu cadeeyo inay iyagu ka qiimo iyo khayr badan yihiin kuwa kale.Tartankaasi oo ahaa mid aad u culus ayaa hadaladii la is dhaafsaday waxay ay ahaayeen sidatan:
Masakiintiina waxay dheheen: Anagu waxaan ku noolahay xasilooni, qanaaco iyo wareer la´aan, maxayeelay Jacaylka maalkuna ama aduunyaduna wuxuu keenaa murugo, naxdin, madax xanuun iyo cuduro badan.
Maalqabeenadiina waxay dheheen; dhaqaaluhu waa tiirka nolosha adkeeya, qurxiya, dadkuna isagay wanaaag kasta ku gaaraan, hodanimaduna waa raaxo iyo ilqabawsi, xoolaha ayeyna dadku Rabbi (swt) ugu dhawadaan.
Masakiintiina waxay dheheen: Maalku waa aduunyada nuxurkeeda, Ilaahayna adoomihiisa wanaagsan lama jecla aduunyo, Rabbina (swt) waa ka kaaftoon-yahay aduunyo iyo dulinimadeeda.
Maalqabeenkiina waxay dheheen: Abuurka maalku wuxuu ku yimid xikmad Ilaahay, qofkuu maal siiyana waa qof uu isagu karaameeyay.
Masakintiina waxay dheheen: Fircoon wuxuu ahaa nin aad umaal badnaa, una xad gudbay, si xuna loo halaagay!
Maalqabeenkiina waxay dheheen; taa haku qaldamina, maxaa yeelay, Sulayman wuxuu ahaa Nabi lasoo diray, wuxuuna mulkiyay aduunyada oo dhan. Nabi Dawudna wuxuu lahaa 33kun oo waardiye, kursigiisuna wuxuu kasamaysnaa Dahab . Waliba ahlu Janadu waa hodan, wayna farxayaan, noloshooda ayaana karaaxa badan mida maalqabeenka. Ahlu naarkuna waa dad aad u baahan, aad u dulaysan, sidaa darteed anagaa idinka khayr badan.
Rabbina uu ogyahay qof kasta waxa ama sida uu suubiyo, uuna siiyay wax ku baboon dabeecadiisa siuuna u fitnoobin.
Yaad malaynaysaa inuu tartanka ku guulaystay?
by: Axmed Maxamed Salah (A/Diinaash)